Dallaaliinta Sarifka calamiga ah ee ugu Fiican 2022 & Isweydaarsiga Lacagta Cryptocurrency
Koontada Demo ee bilaashka ah
dilaaliinta ugu fiican
Dilaaliinta Ugu Kalsoonida Badan
Dillaaliinta Bilowga ah
Dalaaliinta PAMM ugu fiican
apps ugu fiican
Ganacsiga Waqtiga Go'an
Deeqaha waxbarasho ee ugu fiican 2022
Kaar ku iibso BTC
Iibso BTC Anonymous
Ku iibso Paypal
Beddelka Bilowga ah
Dhammaan lacagaha loo yaqaan 'Cryptocurrencies'
Tilmaanta Cabsida iyo Damaca
ICO-yada oo socda
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency Wallets'
Boorsooyinka ugu fiican
Wallet ugu fiican Ethereum
Jeebka Bitcoin ee ugu fiican
Qiimaha ugu fiican ee la iibsado Litecoin
Calaamadaha & Robots
U hel dilaalka ugu fiican adiga
Waxaan u heellannahay inaan keenno ganacsatada dib u eegista dilaaliinta eex la'aanta ah si aan uga caawinno inay helaan dallaaliyeyaasha Forex ugu fiican, ikhtiyaarrada binary iyo beddelashada cryptocurrency ee baahiyahooda ganacsi ee internetka.
Waxaan haynaa dib-u-eegis qotodheer oo qoto-dheer oo dillaaliin ah, qiimeynno iyo qalab isbarbardhigga oo anfacaya si aan uga caawino ganacsatada si dhakhso leh oo fudud inay u aqoonsadaan dillaaliinta ugu fiican baahiyahooda shaqsiyeed.
*Waxaa laga yaabaa in raasamaalkaagu uu khatar ku jiro
Maalgelinta Forex, CFD iyo ikhtiyaarrada FX waxay ku lug leedahay khatar weyn oo khasaare ah oo kuma habboona dhammaan maalgashadayaasha.
Debaajiga ugu yar ee gelitaanka
xisaab demo lacag la'aan ah
Qalab waxbarasho oo badan
Daawo Hadda!Imtixaanka Ganacsiga OlympigaDaawo Hadda!Imtixaanka Ganacsiga Olympiga
muuqaalo bilaash ah
In ka badan 100 hanti oo lagu ganacsanayo
ka bixitaan degdeg ah
Madal-farsamo-sare oo abaal-marin ah
Daawo Hadda!Imtixaanka DeiveDaawo Hadda!Imtixaanka Deive
Xulasho badan oo qalab ganacsi ah
Xeerar kala duwan
Abaalmarino caalami ah oo kala duwan
Daawo Hadda!Imtixaanka AvaTradeDaawo Hadda!Imtixaanka AvaTrade
Eeg dhammaan dilaaliinta
Dib u eegista dallaalka ee ganacsiga
Kooxdayadu waxay daraasad ku sameeyeen boqollaal dallaal waxayna kuugu keenayaan xogta ugu muhiimsan ee falanqayn kooban oo faahfaahsan si ay kaaga caawiso inaad qaadato go'aan xog ogaal ah oo aad ku dooranayso dallaaliinta ganacsiga ugu fiican baahidaada gaarka ah.
Waa maxay dilaaliinta ganacsiga?
Dilaal ganacsigu waa dhexdhexaadiye u oggolaanaya macaamiisha inay iibsadaan oo ku iibiyaan qalabka ganacsiga ee khidmad yar oo komishanka ah. Waxay siiyaan ganacsatada iyo maalgashadayaasha marin u helka goobo si ay uga ganacsadaan suuqyo kala duwan sida Forex, Stocks, Badeecadaha, Cryptromes, Mustaqbalka, Indices, Biraha, Tamarta, Options, Bonds, ETFs, CFDs, iwm. kuwaas oo bixiya qalab maaliyadeed oo isku dhafan.
Marka laga soo tago bixinta xisaabaadka ganacsiga iyo aaladaha, dilaaliintani waxay inta badan bixiyaan adeegyo dillaalnimo oo kala duwan, oo ay ku jiraan agab waxbarasho, aalado ganacsi, falanqaynta suuqa, barnaamijyada ganacsiga, aaladaha ganacsiga bulshada, iyo qaar kale.
Sidee looga ganacsan karaa online?
Ganacsiga khadka tooska ah wuxuu ku lug leeyahay maalgashiga alaabada maaliyadeed iyadoo la adeegsanayo goob ganacsi oo ay bixiso shirkad dillaal ah oo bixin doonta suuqyo iyo hanti kala duwan oo kala duwan.
Markaad ka ganacsatid internetka, waxaad iibsanaysaa (dheeraadaysaa) ama iibinaysaa (gaaban) qalab maaliyadeed oo aad qiyaasi doonto in qiimayaashu kor u kici doonaan ama hoos u dhici doonaan si aad isugu daydo inaad ka faa'iidaysato dhaqdhaqaaqa suuqa. Dallaalku wuxuu u shaqeeyaa sidii dhexdhexaadiye u dhexeeya ganacsadaha iyo suuqyada ay ka ganacsanayaan.
Ganacsiga khadka tooska ah ayaa si fudud loo heli karaa, qof kasta oo leh xiriir internet wuxuu furi karaa akoon dillaal ah oo wuxuu ka ganacsan karaa onlayn isagoo adeegsanaya desktop-ka, webka iyo aaladaha ganacsiga elektaroonigga ah ee mobilada.
Sidee loo maamulaa suuqa sarifka calamiga ah?
Suuqa sarifka calamiga ah waxa nidaamiya sharci wadamo badan oo aduunka ah. Tani waxay lagama maarmaan u tahay in la yareeyo suurtogalnimada khayaanada dhinaca sarifka lacagaha qalaad iyo in la ilaaliyo raasamaal maalgashadayaasha.
Si loo soo galo suuqa kala iibsiga, dullaalku wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu iska diiwaan geliyo urur ahaan oo bixiya adeegyo maaliyadeed.
Taasi waa, shatiga dullaaliinta sarifka calamiga ah maaha mid qasab ah. Laakiin dilaaliinta kuwaas oo qorsheynaya inay si daacad ah u shaqeeyaan waxay u eegaan inay helaan shati, sababtoo ah waxay siinaysaa dadka isticmaala dammaanad isku halaynta iyo ilaalinta.
Runtii, si loo helo shatiga, dullaalku waa inuu buuxiyaa shuruudo dhowr ah oo adag: inuu maraa xaqiijinta saxda ah, abaabulo sanduuqa magdhowga, ilaaliyaa warbixino hufan, iwm. Shatiga dilaaliinta waxa loo qaybiyaa dhawr heerar.
US Deivatives Exchange Commission (CFTC) iyo US National Futures Association (NFA) Kuwani waa ururada ugu baahida badan, waxay si adag u xakameeyaan shaqada dillaaladooda, sidaas darteed dallaaliyeyaasha haysta shatiyada noocan oo kale ah ayaa ah kuwa ugu kalsoonida badan.
Hay'adda Sharciyaynta Maaliyadeed ee UK (FSA) iyo Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Halkan, shuruudaha bixinta liisanku waa wax yar ka sahlan, laakiin guud ahaan aad bay u adagtahay in la helo.
Qubrus Securities and Exchange Commission (CySEC) iyo Maamulka Adeegyada Maaliyadeed ee Malta (MFSA). Warbixintu way ka sahlan tahay, guud ahaanna xakamaynta ayaa u liidata ururadan. Si kastaba ha ahaatee, shatiyadooda sidoo kale waxaa la siiyaa kaliya dilaaliin la aamini karo.
Komishanka Adeegyada Maaliyadeed ee Jasiiradaha Virgin Islands (FSC BVI) iyo Belize's International Financial Services Commission (IFSC). Ururadani uma baahna dallaal xafiiskooda wakiil u ah, laakiin waxay sameeyaan xisaab-xidhid joogto ah.
Heerarka shanaad iyo lixaad
Seychelles Maamulka Adeegyada Maaliyadeed (SFSA) iyo Saint Vincent iyo Hay'adda Sharciyaynta Maaliyadeed ee Jasiiradaha Grenadines (SVG FSA). Waxay ka kooban yihiin nidaamka shatiga la fududeeyay iyo heerka xakamaynta oo la dhimay.
Xeer-ilaaliyeyaashan waxaa loo soo qaatay tusaale; run ahaantii, waxaa jira wax badan oo dheeraad ah. Doorashada ugu fiican ayaa ah in la doorto dilaal hawlihiisa ay maamulaan hay'adaha heerka 1 ilaa 4; waa kuwa ugu kalsoonida badan.
Laakiin waxaa jira hal faahfaahin dheeraad ah. Dhul ahaan, xeer-ilaaliyehu waxa uu awood sharci ku leeyahay xudduudaha waddankiisa oo keliya. Tani waxay la macno tahay, haddii, tusaale ahaan, degane Midowga Yurub uu ka shaqeeyo Midowga Yurub, kaliya xeeriyeyaasha EU ayaa ilaalin kara.
Waa maxay dilaal la aamini karo?
Markaad dooranayso dallaaliyaha Forex, waa muhiim inaadan ku dhicin dhibbanaha tuugta, waxa loogu yeero "dukaanka baaldiga" ama shirkadda "cinwaan la'aan".
Si aan kaaga caawino inaad ogaato farqiga u dhexeeya dallaal aan damiir lahayn iyo mid la aamini karo, waxaan soo saarnay dhowr calaamadood oo muujinaya dillaal aan damiir lahayn iyo dillaal la aamini karo:
dilaal aamin ah khayaanada
Macluumaadka shirkadu waxay tilmaamaysaa dhammaan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka; dilaalku wuxuu la shaqeeyaa bilawga iyo ganacsatada khibrada leh labadaba Waxaan doorbidayaa inaan la shaqeeyo ganacsatada cusub, waxyaabo badan oo xayeysiis ah oo loogu talagalay bilowgayaasha
Guddiyada iyo fidinta ayaa si cad loo tilmaamay Guddiyada qarsoon iyo lacag bixinta
Ma jiro simbiriirixan ama cillad Dhibaatooyinka maqaarka maqaarka ee firfircoon, kaydinta server-ka, silbashooyinka joogtada ah
Adeegga macaamiishu waa firfircooni, la-taliyeyaashu si fiican ayay u qalmaan Taageerada macaamiishu waa aamusan yahay, wax degdeg ah oo la hagaajin karo ma jirto
Ka-noqoshada lacagaha ayaa si degdeg ah loo fuliyaa Jawaab celinta macmiisha ayaa had iyo jeer dhibaato kala kulma ka bixista lacagaha
Shirkad leh taariikh dheer, ganacsi weyn, shati iyo tiro badan oo dib u eegis togan Shirkaddu waa cusub tahay, asal ahaan iyo baaxadda caasimadda la oggolaaday lama garanayo, shatiga lama daabicin, faallooyinka macmiilku waa taban ama faallooyinku waa kuwo togan laakiin waxay u qoran yihiin sidii inay yihiin "koobi kaarboon"
Wax badan ka ogow!
Diiwaangelinta Degdega ah
AvaTrade waa qayb ka mid ah liisaskayada aaladaha ganacsiga bulshada ee ugu wanaagsan maadaama ay siiso ganacsatada goobo ganacsi oo toos ah iyo kuwo aan toos ahayn.
AvaTrade waxay iskaashi la samaysay qaar ka mid ah bixiyeyaasha calaamadaha ugu fiican adduunka si loo hubiyo in ganacsatadu ay raaci karaan ganacsatada ugu fiican meel kasta oo ay joogaan.
Waxay sidoo kale bixiyaan ganacsi is-hag ah oo ku saabsan aalado ganacsi oo dareen leh oo kala duwan oo ka badan 250 qalab ganacsi oo ay ku jiraan forex, CFDs iyo cryptocurrencies.
Goobaha ganacsiga ee AvaTrade waxaa ka mid ah:
Ganacsade Muraayad - Ku raaxayso ganacsi gacan-gacmeed, badh-otomaatig ah ama toos ah adoo raacaya bixiyeyaasha calaamadaha aad doorbidayso. Waxa kale oo aad nuqul ka samayn kartaa istaraatiijiyado ganacsi oo algorithm ah oo ay soo saareen ganacsato khibrad leh oo ay la socdaan horumariyeyaasha hormuudka ah.
ZuluTrade - Ka dooro tiro badan oo ah bixiyeyaasha calaamadaha, oo ku kala jira iyadoo la adeegsanayo cabbirro wax ku ool ah oo kala duwan, oo ay ku jiraan hoos u dhigista ugu badan iyo celceliska faa'iidada.
AvaTrade waa mid ka mid ah dilaaliinta internetka ee ugu weyn adduunka marka loo eego mugga ganacsiga. Waxaa lagu maamulaa 6 xukun oo cajiib ah oo ay ku jiraan Yurub, Australia iyo Koonfur Afrika. Ruqsaddeeda sharciyaynta waxay ka kooban tahay 5 qaaradood. Tani waxay hubinaysaa inaad samayn karto ganacsi badbaado leh oo ammaan ah jawiga ganacsi ee dhamaystiran ee ay bixiyaan.
AvaTrade waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ganacsi bulsho oo kala duwan oo ay la socdaan khidmadaha tartanka, kaabayaasha ganacsi ee hogaaminaya warshadaha iyo taageerada macaamiisha heer sare ah.
Sababahan iyo in ka badan dartood, waxay si fudud u noqdaan meheradahayada ganacsi ee bulsho ee ugu wanaagsan.
In ka badan 250 qalab ganacsi
Goobo ganacsi oo bulsho oo badan
Aaladaha ganacsiga ee bilaashka ah iyo tilmaamayaasha
Xeerarka 6-da maamul
taageero macaamiisha heer sare ah
Debaajiga ugu yar ee $100
Dhammaan ganacsatada sarifka calamiga ah waxay u baahan yihiin inay qiimeeyaan arrimaha soo socda:
Qiyaasta Ganacsiga: Waa inay jiraan tiro badan oo hanti ah oo laga kala dooranayo, oo leh taariikho dhicii oo kala duwan oo laga dooran karo. Waa in ay jiraan ugu yaraan laba qalab oo kala duwan oo laga dooran karo, in kasta oo dilaaliinta badani ay bixiyaan wax ka badan.
Luuqadaha Platform: Tani waxay noqon doontaa mid ka muhiimsan qaar ka mid ah kuwa kale. Dhammaan qaybaha waxaa lagu bixiyaa Ingiriis, laakiin ikhtiyaarrada luqadda dheeraadka ah aad ayey u kala duwanaan karaan. Hubi in website-ka iyo goobta lagu bixiyo luqadaada hooyo.
Debaajiga ugu yar: waa maxay qiimaha lagu bilaabayo ganacsiga? Dillaaliintu wax lacag ah kama qaadaan ganacsigiiba, markaa dhammaan lacagaha la shubo waxaa loo isticmaali karaa in lagu ganacsado. Celcelis ahaan deebaajiga ugu yar waa inta u dhaxaysa $10 iyo $300. Qadar kasta oo ka badan tan waxaa loo tixgeliyaa in ka sarreeya celceliska.
Ikhtiyaarada Bangiyada: Adiga habka bangiyada door bidaa la bixiyaa? Su'aashan waa in laga jawaabaa bilawga habka qiimaynta, sababtoo ah haddii kale, waa inaad raadisaa dullaal kale.
Gunnooyinka iyo Dalacsiinta: Lacagta gunnada ah ilaa 100% waxaa bixiya qaar ka mid ah dilaaliinta. Kuwani waxay la imaan doonaan shuruudo ay tahay in la buuxiyo ka hor inta aan la samayn ka bixitaan. Si kastaba ha ahaatee, gunnooyinka iyo dallacaadyada kale waxay siin karaan dhaqaalaha akoonnada kor u kac wanaagsan.
Taageerada macmiilka: Maamule xisaabeed gaar ah ayaa laga yaabaa ama lama bixin karo, laakiin dhammaan ganacsatadu waa inay galaangal u yeeshaan taageerada macaamiisha. Tixgelinta aaggan waxaa ka mid ah hababka la heli karo iyo saacadaha inta lagu jiro taageerada la bixiyo.
doorashooyinka ee dillaaliinta la heli karo waxaa ku jiri doona shirkado cusub iyo kuwo la aasaasay labadaba. Kuwo badan ayaa nidaamsan, halka qaarna aysan sabab u ahayn meesha ay ku sugan yihiin.
Waxaa xaqiiqo ah in kuwa la shaqeeya dilaal weyn ay u muuqdaan inay helaan dakhliga ugu badan oo ay la kulmaan tirada ugu yar ee dhibaatooyinka.
Iyadoo laga yaabo inaad ku faraxsan tahay inaad bilowdo, waxaa jira faa'iidooyin badan oo aad ku qaadato wakhti aad ku dooranayso midka ugu fiican. dilaal ee Forex.
Waa maxay suuqa sarifka calamiga ah?
Kani waa suuqa sarifka lacagaha qalaad oo kulmiya hawlaha maaliyadeed ee bangiyada iyo ururada caalamiga ah. Nidaamka dhaqaale ee ugu wayn aduunka qof walba wuu heli karaa.
Sida loo bilaabo ganacsiga sarifka calamiga ah?
Mar haddii qofku aanu noqon karin ka qaybqaatayaal suuqa, ganacsatadu waxa ay u baahan yihiin in ay iska diwaan galiyaan dallaalka sarifka calamiga ah. Dallaalku wuxuu siiyaa ganacsadaha goob ganacsi, agab ganacsi iyo dhammaan fursadaha ganacsi ee sarifka calamiga ah.
Ma jiraan wax ikhtiyaari ikhtiyaari dakhliga Forex dadban?
Haa Ganacsaduhu waxa uu maalgalin karaa khatarta ugu yar ee xisaabaadka PAMM/LAMM, kuwaas oo ay maamulaan ciyaartoy suuqa ah. Waxa jira astaamo kale sida maaraynta kalsoonida iyo adeegyada ganacsiga koobiga.
Sidee ammaan ah suuqa sarifka calamiga ah?
Sida ganacsiga loo sameeyo iyadoo loo eegayo nooca margin, waxaa had iyo jeer jira khatar oo marka hore waa mid aad u sarreeya. Laakin dilaaliinta waxay bixiyaan dhowr fursadood oo wax ku ool ah oo loogu talagalay kala-duwanaanta halista, tusaale ahaan faylalka PAMM. Sidoo kale, lacagaha magdhowga degdega ah.
Maqaalka Xulashada Binary
Dallaaliinta ku taxan mareegaha waxa ay soo mareen cilmi-baadhis iyo falanqayn qoto-dheer.
Hadafkayagu waa inaan ku bixino dib u eegis aan eex lahayn oo ku saabsan dillaaliinta ganacsiga khadka tooska ah si aan ganacsatada u siino faham cad oo ku saabsan dillaaliinta kala duwan ee la heli karo. Ganacsatadu waxay isticmaali karaan adeegeena bilaashka ah, laakiin waa inay sameeyaan dadaalkooda gaarka ah oo ay go'aanadooda gaaraan marka ay dooranayaan dallaal ganacsi oo online ah oo ku habboon baahidooda shakhsi ahaaneed.
In kasta oo xogtayada inteeda badan ay si toos ah u xaqiijiyeen dullaaliintan, way kala duwanaan kartaa waqti ka waqti. Annagu mas'uul kama nihin macluumaadka khaldan ama duugoobay ee dib u eegista dillaaliintayada ganacsiga onlaynka ah waana inaad si toos ah u xaqiijisaa dhammaan xogta dilaaliyaha. Heerarka, shuruudaha, alaabada iyo adeegyada boggaga internetka ee cid saddexaad waa la bedeli karaa ogeysiis la'aan.
Forexdigital.net waxaa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya oo looguma talogelin in la qaybiyo ama u isticmaalo qof kasta oo jooga waddan kasta ama xukun halkaas oo qaybintaas ama isticmaalkaas ay ka hor imanayso sharciga ama xeerka deegaanka. Mareegtan ma bixinayso talo-bixin maalgashi, mana aha dalab ama codsi nooc kasta ah si aad u iibsato ama u iibiso alaab kasta oo maalgashi. Waxaa laga yaabaa in magdhow nalagu siiyo iyada oo loo marayo xayaysiiyayaasha dhinac saddexaad. Magdhawgan waa in aan loo arkin in ay tahay taageero ama talada forexdigital.net, mana aha in ay saamayn ku yeelato qiimaynta dullaaliintayada.
CFDs, Forex, Cryptocurrencies iyo qalabyada kale ee maaliyadeed waxay wataan khatar sare oo ah inay si degdeg ah u lumiyaan lacag sababtoo ah faa'iidooyin. Dhammaan bixiyeyaasha waxay leeyihiin boqolkiiba badan oo ah xisaabaadka maal-gashadayaasha tafaariiqda kuwaas oo luminaya lacag marka ay ka ganacsanayaan CFD-yada iyo agabka kale ee maaliyadeed ee shirkadahooda. Waa inaad tixgelisaa inaad fahantay sida CFDs, Forex, Cryptocurrencies u shaqeeyaan iyo inaad halis u geli karto inaad lumiso lacagtaada. Waligaa ha galin lacag aadan awoodin inaad lumiso.
Xuquuqda daabacaadda © 2022 - Forexdigital.net Xuquuqda daabacaadda way xifdisan tahay.